China Chipboard skru rụpụta na ụlọ ọrụ | Zhanyu
Hex isi mkpọpu ala kposara
Hex anya bolt cup isi
Truss isi onwe mkpọpu ala sc ...
· Nha: M3.5 / M4 / M5 / M6
· Imecha: Black phosphorous / Zinc plated
· Agba: Nwa / White / Yellow
· Ihe: C1022A
· Mbukota: 25kg akpa / Igbe na katọn
Chipboard skru bụ ụdị ngwaahịa nke kwesịrị ekwesị maka nrụnye ọrụ eletriki mgbe usoro ọgwụgwọ ọkụ gasịrị. A na-ejikarị ya eme ihe maka njikọta na ijikọ n'etiti efere osisi na n'etiti efere osisi na obere nchara nchara. Ogo ya bụ m3-m6, ihe dị ike c102a, a na-eme ka ọgwụgwọ dị elu, agba dị n'ozuzu, acha anụnụ anụnụ na ọcha.
N'ime ụlọ ọrụ ngwa ngwa niile, ngwaahịa a dị mkpa dị ka nkụ na mgbidi akọrọ ma nwee nnukwu olu ahịa. A na-ejikarị ya arụ ọrụ ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana ọ ka nwere oke na ahịa N'onwe Gị. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-azụ ụlọ na-azụ ụdị dị iche iche na nnukwu ụlọ ahịa, nke a na-ejikarị maka ntinye nke okporo ụzọ, hinges (dịka 3.5 * 16, wdg), ntinye mgbasa azụ (dịka 4 * 40, wdg), na dochie osisi kposara iji wụnye na imepụta arịa ụlọ na oche. Ogo dị mma, efere yuan Ling nke Shanghai hangtou ọkọlọtọ akụkụ ụlọ ọrụ nrụpụta ka mma yana ọnụahịa nkwakọ ngwaahịa dị mma Ọ dị mma na akụnụba n'akụkụ niile. Mboanuohia iku eriri eriri osisi ịghasa bụ ihe ka mma ngwaahịa nke nkịtị fibreborn ịghasa. Ọ na-tumadi kachasị si imewe nke eri, achụso elu mkpọpu ala ọsọ, na idozi nsogbu nke cracking mfe mere site na iji nke osisi siri ike, na teknuzu ọdịnaya dị elu.
Ruo n'ókè dị ukwuu, ọ nwere ike dochie anya iji nkụ osisi nkịtị (nkụkọ osisi na-enweghị ọgwụgwọ ọkụ). N'otu oge ahụ, a na-emepụta klọọkụ site na teknụzụ nke shrinking rod nke mbụ ọrịa AIDS butere ụzọ, nke na-abụghị naanị ịchekwa ihe, kamakwa na-eme ka eri ahụ dị nkọ.
Nke gara aga: Akpukpo ahihia eri otu eriri drywall ịghasa
Osote: CSK isi onwe mkpọpu ala kposara
Truss isi onwe mkpọpu ala kposara
Standard C-ngalaba ígwè maka unistrut dị ọkụ-di ...
Elu àgwà carbon ígwè DIN934 hegzagon aku m3 ...
USB tree ngwa, e ji ebu bolts, Flange ...
Carbon nchara hegzagon bolt